Gilead Skuul, Patterson, New York
Ofi ber tsentsen nye yi na Theocracy ntsetsee ayɛ Jehovah Adasefo hɔn ahyɛnsewdze. Woesiesie skuul etsitsir bi ama hɔn a wɔdze hɔn ber nyina reyɛ Ahendzi asɛmpakã edwuma no, mbrɛ ɔbɛyɛ a wobotum ‘ewie hɔn som koraa.’​—2 Timothy 4:5.
Akwampaaefo Ɔsom Skuul. Sɛ ɔkwampaaefo bi yɛ ber nyina som edwuma no afe kor a, wɔma ɔkɔ nda esia skuul bi wɔ n’apaamu hɔ Ahendzi Asa bi do. Skuul yi ne tsirmpɔw nye dɛ ɔbɔboa ɔkwampaaefo ma ɔaabɛn Jehovah, na oeetu mpon kɛse wɔ ɔsom edwuma no n’afã biara, na ɔaakɔ do dze nokwardzi asom.
Ahendzi Asɛmpakafo Skuul. Wɔdze abosoom ebien skuul yi tsetse akwampaaefo a hɔnho awea na wɔwɔ ɔpɛ dɛ wobotu efi hɔn kurow mu na wɔaakɔsom wɔ beebiara a wobehia hɔn no. Ɔkwan bi do no, wɔkã dɛ, “Emi nye yi; soma me ɛ” dze sũasũa Jesus Christ, Ɔsɛmpakafo a ɔsen obiara a ɔasom wɔ asaase do pɛn no. (Isaiah 6:8; John 7:29) Ibia fie a wobefi akɛtsena ekyirkyir beebi no bɛma no ho ebehia dɛ wɔma hɔn asetsena ba famu. Obotum mpo asor beebi a wɔrokɔ no amambra, hɔ wimu tsebea nye edziban ahorow no koraa efi dza nna wonyim no ho. Ibia obehia mpo dɛ wosũa kasa fofor bi. Dɛm skuul yi boa esigyafo nye awarfo a woedzi mfe 23 kesi 65 ma wonya suban pa ahorow a ɔbɔboa hɔn wɔ beebi a wɔrokɔsom no, nye nyimdzee a ɔbɛma Jehovah nye n’ahyehyɛdze no dze hɔn edzi dwuma yie.
Ɔweɔn-Aban Gilead Bible Skuul. Wɔ Hebrew kasa mu no, “Gilead” kyerɛ “Dase Siw.” Ofitsi 1943 a Gilead bɔbɔɔ adze no, nyimpa bɔbor 8,000 a woewie skuul yi bi na wɔasoma hɔn dɛ asɛmpatserɛwfo dɛ wonkedzi dase ‘nkodu asaase ano noho,’ na iyi asow aba. (Ndwuma 13:47) Aber a hɔn a woewie skuul yi bi dzii kan kɔr Peru no, nna asafo kor mpo nnyi ɔman no mu. Naaso sesei asafo bɔbor 1,000 na ɔwɔ hɔ. Aber a hɛn asɛmpatserɛwfo no hyɛɛ ase dɛ wɔrosom wɔ Japan no, nna Adasefo a wɔwɔ ɔman no mu no nndu du mpo. Ndɛ, hɔn dodow bor 200,000. Wɔ abosoom enum Gilead Skuul yi mu no, wosũa Nyankopɔn Asɛm no kɔ ekyir. Hɔn a wɔsom dɛ akwampaaefo etsitsir, asɛmpatserɛwfo, wɔwɔ edwumayɛbea nkorbata, anaa wɔyɛ amansin edwuma no na wɔma wɔkɔ skuul yi bi kɛgye ntsetsee a ɔkɔ ekyir a ɔbɔboa hɔn ma wɔaahyɛ wiadze nyina asɛmpakã edwuma no mu dzen, na wɔaama woeetsim.
Ebɛn tsirmpɔw ntsi na wɔyɛ Akwampaaefo Ɔsom Skuul no?
Woananom na wɔyɛɛ Ahendzi Asɛmpakafo Skuul no maa hɔn?
Jehovah Adasefo—Wɔayɛ Nhyehyɛɛ Dze Rekã Asɛmpa No
Wonyim Jehovah Adasefo yie paa dɛ nyimpa a wɔyɛ Bible nkyerɛkyerɛ edwuma wɔ wiadze nyina. Ɔkwan bɛn do na wɔhyehyɛ hɔn dwumadzi, wonya ho akwankyerɛ na wotua ho kaw?